Stöd A-Ö för dig som varit arbetslös länge - Arbetsförmedlingen
/ Stöd A-Ö för dig som varit arbetslös länge
Taageero laguugu tala galay adigaaga muddo dheer shaqo la’aanta ahaan
Haddii aad muddo dheer shaqo la’aan ahayd waxaad u baahan kartaa caawimaad dheeraad ah. Waxaa jira taageerooyin kala duduwan si loo joojiyo shaqo la'aantaada.
Waxaad ka heli kartaa taageero iyada oo loo marayo dadaal ah diyaarin shaqo haddii aadan weli diyaar u ahayn inaad shaqo doon doonto ama waxbarasho
Marka aad u baahantihid caawimaad si aad suuqa shaqada u soo gashid. Waxaad isku darsaneysaa shaqo hordhac ah iyo waxbarasho, oo labaduba xoojinaya kartidaada aqoon-iyo shaqo, daboolayana baahida shaqabixiyaha.
Shaqo markaas qofka loo billaabay waxay adigaaga muddo dheer shaqo la’aanta ahaa ama jirro awgeed ka maqnaa suuqa shaqada, ku siineysaa fursad aad dib ugu billawdid.
Aaggaaga waxaa ka jiri kara mashruuc la xiriira siyaasadda suuqa shaqada oo aan la wadno laacibiin kale. Haddii uu aaggaaga ka jiro mashruuc habboon waxaa laguu soo jeedin karaa in aad ka qeyb qaadatid.
Abaabulid iyo is-qabadsiin [Rusta och matcha], waxaa loogu talagalay qofka adigoo kale ah, oo u baahan taageero dheeraad markii aad shaqo raadsnaayso. Adiga ayaa dooranaya shirkadda ku caawini doonto, waxaana lagu yeeli doonaa qof hage ah, kaasoo ka caawin doono helida shaqo ama waxbarasho.
Shaqaaleysiinta xirfad baridda waxaad ku baraneysaa xirfad, waxaad ku heleysaa khibrad, waxaadna kor ugu qaadeysaa fursadahaaga ku aaddan in aad shaqo heshid.